Kutheni uphupha iirasi, incwadi yephupha - khangela iirase ephupheni
Iintlobo ezimnandi neziqholiweyo emhlabeni jikelele zifuzisela uthando nothando. Kodwa akusoloko ixabiso layo ephupheni lihambelana nenkcazelo enjalo. Ulindele ntoni ukuba iphupha liphupha ephupheni? Kuxhomekeke kwiinkcukacha zephupha kunye nencwadi yephupha oyifake isicelo sokutolika.
Ukubona iirasi ephupheni ngencwadi yephupha labesifazane
Ukubona iintyatyambo ezintsha ezintle - ukhethiweyo wakho uthembekile kuwe, kunye neziganeko ezimnandi ziza kuza. Ngaloo ndlela, ukuba iirase ezimileyo ziphupha, ke oku kutyana kunye nokudakumba. Ukuba uphupha isiqithi esinamaqabunga angakacali, ngoko kungekudala uza kubona inzuzo enkulu. Iifoto ezibomvu ezikhanyayo kwintlambo kwindawo ephuphayo ukuba ithemba lakho liza kuzaliseka, ukuzisa intle. Ukuze uzive iphunga elimnandi kwiphupha - uvuyo lwakho aluyi kuba lukhutshwe nantoni na. Batshaya iirase ezimhlophe ngaphandle kwamaconsi ambethe kwaye basemthunzini - kwisifo esibi. Yaye ukuba uphupha izimbali kunye neengqimba ze-roses - umtshato ovuyayo. Ukuhlobisa iinwele kunye ne-red rose - ukuphazamisa ithemba.
I Roses kwincwadi yephupha kaMiller
Ukutolika kwimiqulu ephuphayo ye-roses ebomvu kuthetha ukuthembeka kwesiqingatha sakho sesibini. Ukusika iirasi ephupheni, ukukhula kwibhede leentyatyambo - kumtshato osheshayo kunye nomthandayo. Ukuba ungenayo okwangoku, uya kudibana nakwixesha elizayo. I-roses i-wilted i-wilted - uhlamvu lwakho lubanda kakhulu, nangona ngaphakathi ngaphakathi unqwenela uthando novakalelo, njengawuphi na umntu. Ukuze uhlale ungedwa, kuya kufuneka unqobe ukuhlanganiswa kwakho. I-rose roses ezimhlophe amaphupha ezinkinga zempilo. Kunconywa ukuba uviwo lwezokwelapha kwaye uqale ukwenza imidlalo. Iphunga eliviniweyo elincinci ephupheni liphawu olubi, wena okanye obathandayo bakho basengozini. Kodwa, ukuba ujamelana nayo, uya kuvuzwa ngokupheleleyo ngoku.
Yintoni iphupha lephupha leVangi
Ngokwale ncwadi yephupha, intsingiselo ye-rose inothando olungenasici. Ukuze ibhinqa likhanye ngamathava e-pinki kwiphupha - uphawu lokuba ucinga ngokungcatsha iqabane. Nqunywe kwiilesi zephupha ezikhulayo kwintsimi yakho - uhlala ujabule ukunika uthando kubathandekayo bakho. Yiva iphunga leentyantyambo - uya kufumana uthando olukhulu. Ukuba ibhinqa liyabona kwiphupha, indlela yokumnika iirasi, kodwa kungekudala iintyatyambo zipholile - lowo unikayo unyanisekileyo kunye naye ngokwenene. Amaphupha ofumana njengesipho isiqhamo esikhulu semifino emhlophe - zonke iingcamango zakho zicocekile kwaye zicacile. Ukutshala ixesha elide kunye nokunyamezela iilesi ephupheni, uze uqaphele iintlekele kwiindawo eziququzekileyo zobomi bokwenene uchitha uthando kumntu ongenanto.
Ukuphupha i-rose incwadi yokuphupha yeFreud
Le ncwadi yephupha iqwalasela iirasi ukusuka kwindawo yokwenza izinto. Iintyatyambo ngokwazo zifanekisela ubufazi, kwaye ameva abo asemzimba. Ukuba ibhinqa eliphupha liye lahlaselwa emininini ye-rose, ngoko ngokwenene unokujamelana nokuhlukunyezwa ngokwesondo. Ukuba unika i-roses ebomvu kwiphupha - zombini kwindoda kunye nomfazi, iphupha elinjalo liza kuxela inzala yothando evela kumntu wesini esahlukileyo. Ukuba uphupha ukuba wena ngokwakho unike umntu iintyatyambo - unomdla onomdla, okanye awunayo iindidi ezaneleyo ebhedini.
Ukutolika kweerose ephupheni ngokubhekiselele kwincwadi yokuphupha yeMeneghetti
Kule ncwadi yephupha, i-rose iphathwa ngokungafaniyo. Ekubandakanya ubuhle, i-gloss, i-glitter-kodwa yonke into engeyomntu, yenzeke. Ngoko ke, ukuba iirasi iphupha iphupha, kungekudala uza kudibana nomntu omhle nomnandi, kodwa ngomphefumlo obolileyo. Ukongezelela, intyatyambo ephupheni ibonakalisa inkanuko yowesifazane kuze kube yinto ekhangelekayo, kodwa, kwakhona, kuphela ekuqalekeni. Uhlobo olungenayo i-pink bud - ukuhlangabezana nabahlobo abatsha. Ukuba intyatyambo iphela, awukhumbuli abahlobo bakho basendulo ixesha elide. I-Red rose ithi udla ukuzonwabisa ubomi, umhlophe-ngokuthozama nokuthintela.
Intsimi enhle ezele iintyatyambo eziqholiweyo - kwintlanganiso ebalulekileyo yothando. Iirusi ezinesibindi zifanekisela ukuhlukana kwentombazana. Ukuba ephupheni uhluma iintyatyambo kwimiyezo yakho, incwadi yephupha inika ingcaciso elandelayo: kungekudala uza kwenza omnye umntu onomusa kwaye unomdla. Ukugcoba kwaye ugqoke i-crown of roses entloko yakho - uya kuba nomtshato nomntu othandekayo. I-vase, apho kukho i-roses emhlophe-into enothando lwakho ayikhathaleli. Iipikisi ezinkulu kwi-stem zizilingo eziza kubangela ingxaki. Ukunika umntu ephupheni i-roses ebomvu, ukulimaza ngexesha elifanayo malunga nameva - kungekudala ubuhlobo buya kuqala, obuya kuqhubeka ubomi bakho bonke, umntu uya kuba ngawe njengomthonyama.
Book Dream Rome
I-Red rose ithetha ukuthandwa, impilo, inhlanhla, amandla omoya, ubudlelwane obuhle nezihlobo. Ubumhlophe - ubumsulwa kunye nokungabi namacala. Ubuncwane obunqabileyo bufanekisela ubungqina obuqinileyo nabunokwethenjelwa, kodwa ukuba luba lukhulu - ulwalamano lwakho nabahlobo luba lubi. Intombazana iphupha ukuba ufumana i-rose njengesipho - ukuthanda nokuthanda ukudala. Ukuba iipalali ziwa phantsi kweepalesi, ubomi obuthile buya kuphelisa. Iintyatyambo ezinomileyo ziyabalahleka - awuyize uzama ukuvuselela iimvakalelo ezide. Uphuzi oluphuzi - umntu unomona, okanye uhlushwa ngumona. Umphunga ohlaza okwesibhakabhaka uphupha intombazana ukuba uyishiya ixesha elidlulileyo kwaye ukhawuleze uqhube ubomi obutsha.
Yiyiphi iphupha lama-roses kwiphupha - intsingiselo yonyana wephupha likaTsvetkov
Sika okanye uqhekeze intyatyambo, ngokuchazwa kwincwadi yalephupha, ukubona umhlobo omtsha kungekudala. Yibhale - ibe ngumhla wokuthandana. Ukutshitshiswe ngeminwe ngephutha kwi-spikes kuthetha ukutshatyalaliswa komntu othandekayo. Ngokuqhelekileyo, ameva, ngokutsho kweTsvetkov, afanekisela zonke iingxabano. Kodwa unako ukuphepha iingxaki xa uhlawula ngakumbi ulwalamano. Ukunika umntu i-chic bouquet of roses ebomvu kuthetha ukuba ebomini ungumntu onobubele. Fumana isipho esifanayo - unembonakalo enhle, ekunceda kakhulu ebomini. Ukuphosa iirase - ukukhawuleza ngokukhawuleza kunye nomthandayo. Ukubona isiqhamo esihle sama roses obomvu - intsapho yakho ilindele ikusasa elihle.
U-Miss Hasse unikeza ukutolika okulandelayo kwincwadi yakhe yephupha. Iilesi ezimbali ziqikelela ukuvuya kunye nolonwabo. Ukukhupha okanye ukuwasika-umtshato okhawulezayo kunye nesiqingatha sakhe sesibini. Fumana iindiza ze roses njengesipho - umthandi wakho uhlala ethembekile. Iipikiti ezinkulu kwi-stem ye-rose ukuyikeka, iziganeko ezingathandekiyo, ukuxabana, ukungcatsha. I-roses ephuzi ukwenza ukwesaba nokukhohlisa, i-snow-white - ukhetho olungileyo lomthandayo. Ukuba iintyatyambo zibuna, kungekudala uzakufuneka utshintshe imikhwa yakho.
I Roses zimi kwi-vase-iingcamango zakho zicocekile. Bamba i-bouquet - kungekudala yonke imvakalelo efihlakeleyo iza kufika phezulu. Iintyatyambo ezintathu ndawonye - uba ilungu lenxantathu yothando. Inani elikhulu lamarose amhlophe ngumqondiso wesifo. Ientyatyambo ezinemibala ephakamileyo yama-rose iqala ukuqala kolwalamano olutsha, kodwa ukuba lomekile okanye lube lukhuni, olu xhulumaniso aluyi kubangela uvuyo. Ukuba uphupha intsimi yonke etsalwa nge roses - kungekudala into enzulu iya kwenzeka kwaye inokuchaphazela isimo sakho sengqondo. Ukuba ephupheni wanikezela umntu i-rose, ngoko ngokwenene iimvakalelo zakho zinzulu.
Le ncwadi yephupha ibona iirase kuphela njengophawu olubi. Yifumana njengesipho - unomtsha ofuna ukuba ube neengxaki ezahlukeneyo okanye nokuba uswele. Sika okanye utyumle iintyatyambo ephupheni kukubonakalisa ukuba kungekudala uza kuchitha iinyembezi ezininzi. Yenza iphunga le-roses - umntu obathandayo uya kukuzisa intlungu kunye nokudumala. Ukunika umntu le ntyatyambo kukufisa umntu ukuba enze okubi. Mamela isazela sakho ukuze ungenzi okubi. Ukutyala iirasi kwintsimi yakho - u khangela iingxaki zakho. Hlala ethuneni - uziva unetyala.
Yintoni intombi ephuphayo? Ukutolika kweencwadi eziziwayo zephupha
Indoda yayilinde: yintoni oko kuthetha ntoni?
Inkukhu ebhaka ngetyuwa
Ukuqhathanisa isantya kwiitamatati, i-fennel kunye ne-basil
Ukuhlamba ngexesha lokukhulelwa kwangaphambili
Iinkwenkwezi zaseRashiya ngoMeyi 9 zenze isenzo "Isigwili esingapheliyo" kwi-Instagram